Soo dejisan WinMend Auto Shutdown 1.4 – Vessoft
English, فارسی, Русский, Türkçe...
Soo dejisan WinMend Auto Shutdown
WinMend Auto xiritaanka – software ah in xiritaanka your computer automaticly. Software The kuu ogolaanayaa inaad ku beddelato kombiyuutarka in ay seexdaan ama hab keydinta tamarta, u soo baxa in nidaamka iyo hoos u computer ka xidhay on jadwal. WinMend Auto XIRIN ka kooban qalab oo awood u reserved dilka automatic ah hawlaha go’an ka dib markii nidaamka xawaaladaha. Software wargelinaysaa user ku saabsan fulinta ficil ah oo awood ah si loo badbaadiyo shaqada ama joojin fulinta hawsha. Sidoo kale WinMend Auto xiritaanka waxa ku qoran qolfaha in Customize muuqaalka of software.
Meeshay of xiritaanka automatic ah kombiyuutarka
Hababka kala duwan ee howlgalka
Wargelinaysaa user ku saabsan fulinta ficilka
WinMend Auto Shutdown Software la xiriira: